आज नयाँ वर्ष, तपाईको नयाँ दिनको भाग्य कस्तो छ ? : २०७७ वैशाख १ गतेको राशिफल – Sagarmatha Online News Portal
आज नयाँ वर्ष, तपाईको नयाँ दिनको भाग्य कस्तो छ ? : २०७७ वैशाख १ गतेको राशिफल
आज वि.सं. २०७७ वैशाख १ गते सोमवार । तदनुसार इ.स. २०२० अप्रिल १३ तारिख । ने.सं. ११४० चौलागा, वैशाख कृष्णपक्ष, षष्ठी, २१ः५२ उप्रान्त सप्तमी ।
आज नयाँ वर्षको पहिलो दिन अर्थात २०७७ वैशाख १ गते । तपाईको नयाँ वर्षको दिन कस्तो रहेको छ त ? हेरौं आजको दिनको राशिफल ।
परिस्थितिको चक्रमा अलमलिनुपर्दा कार्य सम्पादनमा समय लाग्नेछ । अस्वस्थताले कमजोरीको अनुभूति हुनेछ । चुनौतीपूर्ण कामको जिम्मेवारी वहन गर्नुपरे पनि मिहिनेतको परिणाम प्राप्त हुनेछ । शुभचिन्तक र प्रतिस्पर्धीलाई समेटेर काम लिनुपर्ला । योजना पूर्ण नभए पनि आंशिक लाभ अवश्य हुनेछ । रोकिएको काममा समेत सकारात्मक संकेत प्राप्त हुनेछ ।
खानपान तथा मनोरञ्जनमा समय बित्नेछ । प्रियजनसँगको सम्पर्कले दिन रमाइलो रहनेछ । पहिलेको सफलताले थप काममा उत्साह मिल्नेछ । व्यापार सामान्य भए पनि आम्दानी बढ्नेछ । कमजोरी सुधार्दै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ । नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने सहयोगीहरू भेटिनेछन् । बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटवार्ताको संयोग जुर्नेछ ।
सहयोगीहरू पछि हट्नाले चिताएको काममा बाधा पुग्नेछ । प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले केही काम दोहोर्याउनुपर्ला। अवसर र व्यवधानका बीचबाट कर्मयोग अघि बढ्नेछ । लगनशीलताले परिस्थिति सहज बनाउन सकिनेछ । प्रयत्न गर्दा व्यापारमा फाइदा उठाउन सकिनेछ । कामको चाप बढे पनि प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्न सफल भइनेछ ।
कामबाट सोचेको नतिजा तत्काल प्राप्त नहुन सक्छ । साथीभाइसँग असमझदारी बढ्ला । फाइदाका पछि लाग्दा आफ्नै धनमाल गुम्न सक्छ । बेलामा होस नपुर्याउँदा अप्ठ्यारा चुनौती आउन सक्छन् । आक्षेप लगाउनेहरू सक्रिय हुनेछन् भने सहयोग गर्नेहरू कमै भेटिनेछन् । अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ला । अनियन्त्रित खर्चले मन पिरोल्न सक्छ ।
प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ । आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन् । पहिले गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ । आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ । कृषि, पशुपालन तथा व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ । चल-अचल धनको उपयोगबाट मनग्गे फाइदा उठाउन सकिनेछ । दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका प्राप्त हुनेछ ।
तपाईको राशिफलले जेसुकै बताए पनि तपाई कर्ममा विश्वास गर्नुस । नयाँ जोस र जाँगरका साथ नयाँ संकल्प लिएर निरन्तर काम गर्नुस । एक दिन अवश्य सफलताले तपाईको ढोका ढकढक्याउनेछ ।